China GRP Pultruded fiberglass Amafomu fiberglass Tube Sakhiwo FRP nehele Pultrusion Isigaba / Iphrofayili ifektri abakhiqizi | Bonai
I-pultrusion inqubo eqhubekayo esebenzisa ukuqiniswa kwe-fiber nge-thermosetting resin matrices. Izinto zokuqinisa ezikhethwe ngaphambili, njenge-fiberglass roving, umata, izindwangu ezilukiwe noma indwangu ethungiwe, zidwetshelwa kubhavu we-resin lapho konke okokusebenza kufakwe khona i-resin ye-liquid thermosetting. Izinhlaka ezijwayelekile zifaka ama-polyesters, ama-vinyl esters nama-phenolics. I-fiber emanzi yakhiwa yohlobo olufunekayo lwejometri futhi yadonswa kufini yensimbi evuthayo. Uma usungaphakathi kukathayela, ikhambi le-resin liqalwa ngokulawula izinga lokushisa eliphakeme. I-laminate iyaqina esimweni esiqondile somgodi we-die, njengoba idonswa ngokuqhubekayo ngumshini we-pultrusion. Iningi lanoma iyiphi ingxenye yesigaba esinqamulelayo ingashaywa indiva.
Amaphrofayli e-Pultruded GRP ahlinzeka ngamandla amakhulu, ukuqina nokuvumelana. Ama-pultrusions anikela ngezinzuzo eziningi ngaphezu kwezinto zendabuko ezifana nensimbi, i-aluminium kanye nezingodo futhi ukusetshenziswa kwazo kuyanda ezinhlotsheni eziningi zezicelo nezimboni.
Izinhlobonhlobo cishe ezingenamkhawulo zamaphrofayli we-GRP akhokhelwe avumela izinga eliphezulu lenkululeko yokuklama. Izici ezenziwe ngendlela efanele njengamandla, ukuqina, isisindo nombala kungenziwa ngomklamo womkhiqizo ezigabeni zokuqala zentuthuko.
Izindlela zokuhamba nezingxenyekazi
Amapulatifomu ezimayini nezimboni
Izicelo zasolwandle - isib. Ama-marinas, ama-jettys nama-moorings
Umsele wamanzi uhlanganisa
Amapulatifomu wemboni yamakhemikhali nezindawo zokuhamba
Ukwelashwa Kwamanzi / Amanzi Angcolile
Amapulatifomu nezindawo zokuhamba lapho kudingeka khona izakhiwo ezingezona ezikagesi nezishisayo
I-fiberglass (i-Fiberglass) yinto engeyona eye-metallic engajwayelekile esebenza kahle kakhulu. Inezinzuzo ezahlukahlukene. Izinzuzo ukwahlukanisa okuhle, ukumelana nokushisa okuqinile, ukumelana nokugqwala okuhle, namandla amakhulu wokukhanda, kepha ububi bokuba brittleness futhi ukumelana nokugqoka okuthe xaxa. umehluko. Yenziwe nge-pyrophyllite, isihlabathi se-quartz, i-limestone, i-dolomite, i-boronite, ne-boronite njengezinto zokusetshenziswa ngokuncibilika okushisa okuphezulu, ukudweba, ukujija, ukweluka nezinye izinqubo. Ububanzi be-monofilament yayo buningi be-micrometer eya kuma-micrometer angaphezu kwamashumi amabili, okulingana no-1 / 20-1 / 5 wentambo wezinwele, umucu ngamunye we-fiber unamakhulu noma izinkulungwane zama-monofilaments. Ingilazi yefayibha ivame ukusetshenziswa njengezinto eziqinisa izinto ezihlanganisiwe, izinto zokwengeza zikagesi nezinto zokwakha ezishisayo, amabhodi wesifunda neminye imikhakha yomnotho wezwe.
Langaphambilini Izinto Zokwakha U Isiteshi Sensimbi Esivela Ensimbi Yemboni Yensimbi
Olandelayo: I-China Factory eyenziwe ngokwezifiso ye-FRP fiberglass Grating Yokwakha